"What if - Spesterrra" Youth Challenge | Youth 4 Disarmament
"What if - Spesterrra" Youth Challenge
Translated by Chidimma Chime
Ọ bụrụ kwanu na anyị etinye ọtụtụ oge n'udo na obere oge na esemokwu?
Sonyere anyi Ugbua ka I kwuo uche gị!
Ndị United Nations Office For Disarmament Affairs na-achikoba "What if---Spesterrra" ihe ngosi assumpi ndị ntorobịa iji we mee ka umu n'eto eto nwe mmasị na Amamihe gbasara ụzọ dị mma disarmament ka esi nye aka me ka ụwa dị mma, nwe ezi nchekwaa ma bakwara anyị nile.
Eweputara ya na okwu Latin akpọrọ spes, nke pụtara Olileanya, na Terra, nke pụtara ala,"What if---Spesterrra" Assumpi ihe ngosi Ndị ntorobịa na-akpọ ụmụ n'eto-eto n'akụkụ ụwa nile gba gburugburu ka ha Che ka ụwa ga-adị na-enweghị ngwa agha n'eme ihe na-igwe, nke ihe gbasara ihe n'emeru mmadụ arụ ga-abụ nke onye obula na-agaghị enwenwu, Ihe ndị ana enweta na obodo ga eji me ka mmekọrịta na akụnụba bara ndị mmadụ uru bakwara ụwa dum uru.
Bido na ụbọchị iri na ise nke ọnwa Eprel we rue ụbọchị iri na ise nke ọnwa Julaị 2021. Aga akpọ ndị tụrụ ugo na mbido Onwa Ọgọọst.
NDI GA ESONYE
ndị ntorobịa na-akụkụ ụwa nile gba gburugburu bido n'afọ iri na asatọ we rue n'afọ iri abụọ na anọ. Onye ọ bụla ga-eweta ihe ngosi onyonyo("the entrant") ga esonyoreriri Ọfuma n'usoro ime ya (e.g, either as a director, writer, camera person, editor, actor, coordinator, etc.). ị nwere ike gị na enyi gị, onye olu ibe gị Emee Ihe ngosiputa onyonyo ("the second entrant") mana ọ ga adịkwa bido na afọ iri na asatọ we rue n'afọ iri abụọ na anọ, ya na ọ ga-egosi uche na ebunobi onye nke abụọ (the entrant).
Ihe ga-adị n'ime ya: me ihe ngosiputa onyonyo nke ga akọwa ihe nlegara anya gị iche na ụwa ga-adị ka ya ma Ọbụrụ etinye nnukwu ego n'udo na mmepe obodo. Asụsụ: aga eji nwu asụsụ ọbụla we mee ya ihe ngosiputa . Oge Ngosiputa : ọ gaghị ajari nkeji abụọ na tikom iri na abụọ
Aga eji otu usoro we kpe ha nile ya bụ okike, ihe ohuru, ihe mejuputara, isiokwu, na uzo.
mmadu iri na ise ga - abụ ndị ga-eturu ugo mmeri, ha esonyere ndị mba United Nations #Youth4Disarment initiatives websites and social media accounts. Aga akpọ ndị nile tụrụ ugo (a) ka ha ga summer intensive course on disarmament, (b)mepụta recommendations iji we mee ka enweta ụwa ihe bụ isi sekpu ntị na ya bụ udo na mmepe ghara ịbụ ngwa agha nakwa itinye ego n'ihe gbasara ndị agha, na (C) inye ya bụ recommendations na ihe ngosi ndị tụrụ ugo na Ihe mmemme ndị mba United Nations.